Loltoonni Raashiyaa sababa suuraa 'selfie' fi maxxansa biloogiitiin adabaman - BBC News Afaan Oromoo
Loltoonni Raashiyaa sababa suuraa 'selfie' fi maxxansa biloogiitiin adabaman
Goodayyaa suuraa Caamsaa 2010: loltoonni humna bishaanirraa Raashiyaa, suuraa 'selfie' dhaaba Sebaastooppool irratti ka'an
Ministeerri humna ittisaa Raashiyaa seera loltoonni fi miseensonni humna waraanaa biroo, sababa nageenyaatiif jecha, suuraa miidiyaa hawaasaa irratti akka hin maxxansineef dhorku wixineesseera.
Wixineen kun, suuraa, viidiyoo, fi dhimmoonni kan biroo intarneetii irratti ol kaa'aman, odeeffannoo waraanaa diinaaf dabarsee kennuu danda'a jedha. Agarsiiftuun iddoo awutoomaatiikii ta'e gartuun waraanaa eessatti akka ramadame agarsiisuu danda'a.
Seerri kun loltoota biyya keessa jiran qofa osoo hin taane, warreen alatti ergamanii ''yeroo murtaa'eef hojjatan'' caalaatti miidha.
Maxxansaaleen loltoota Raashiyaa humnoota Yukireenii fi Siiriyaatti ramadamanii turan iddoo jiran agarsiisaniiru.
Fakkeenyaaf Adoolessa 2014, loltuun Raashiyaa tokko, finciltoota Yukireen keessatti Raashiyaa deeggaraniif rookkeettii kennuu ilaalchisuun waan maxxanse, riipoortarri BBC Miyrooslaavaa Peetisaa irra deebiin gad-lakkisee ture.
Image copyright Myroslava Petsa (twitter page)
Goodayyaa suuraa Konkolaattonni waraanaa Raashiyaa Rookkeettii fe'anii finciltoota Yukureeniif geessan
Yukireeniif mootummoonni Lixaa Raashiyaan meeshaalee waraanaa gurguddoo fi humna loltuu finciltootaaf ni kennu jechuun himatu.
Raashiyaan gama ishiitiin, tola ooltonni finciltoota gargaaraa akka turan himuun, loltoota idilee akka hin ergine ibsiti.
Gabaasa 'Youtube' irratti gadhiiseen, rippoortarri Vaayis Niiwus, Saayiman Oostirooviskiiy, maxxansaaleen loltoota Raashiyaatiin miidiyaa haawaasaarratti gadhiifaman waraanni Raashiyaa lola Yukireen keessatti kallattiidhaan akkamitti akka hirmaate beekuuf na dandeessiseera jedha.
Barreeffamni garee qorannoo Beeliingkaat irraa Hagayya 2014tti ba'e, maxxansi loltoota Raashiyaa, Baha Yukireen keessatti, gartuu loltootaa 76ffaa keessaa miseensonni akka du'an baruuf nu dandeessiseera jedha.
Gartuun dhaabbataa kun bu'uurrisaa Lixa Raashiyaa, Piskoov keessatti dha.
Beeliingkaat Shoora Waraanni Rashiyaa Siiriyaa keessatti taphate dabalatee, waa'ee walitti bu'iinsaa galmeessuuf xiinxala miidiyaa hawaasaa irratti taasisuun garee beekkamti qabu dha.
Ministeerri Ittisaa Raashiyaa hojjattoonni qaamoleen nageenyaa isaanii waa'ee ofiis ta'e hojii isaanii akka miidiyaa hawaasaa irratti hin maxxansineef dhorkaniiru.
Uggurri haaraa hidhattoota tuqu kun, Amajjii 2018 irraa kaasee hojiirra olla jedhamee eegama jechuun, Tajaajilli oduu 'Taass Niiwus' gabaaseera.